पोखरा बाटिकाको धमाकेदार अफर !!! - Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ अर्थ ∕ पोखरा बाटिकाको धमाकेदार अफर !!!
पोखरा बाटिकाको धमाकेदार अफर !!!
झिल्को डटकम २०७७, कात्तिक २ गते १९:२८ मा प्रकाशित
पोखराको लेकसाइडमा स्थित होटेल पोखरा बाटिकाले ठूला चाडपर्बलाई लक्षित गरि नयाँ प्याकेज अफरको घोषणा गरेको छ । सो प्याकेज घटस्थापनाको दिन बाट २ महिना सम्म मान्यता रहने होटेल ले जनाएको छ ।
नयाँ प्याकेज अनुसार नेपाली ग्राहकले एक रातको ४ हजार २ सय २२ रुपियाँ तिर्नु पर्ने छ । सो मुल्यमा २ जनाले होटेल मा बस्नुका अलावा १ घण्टा सम्म फेवा तालमा डुंगा सयर गर्न पनि पाउने छन । त्यसैगरि एकल पाहुनाका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार १ सय ११ र ३ जना ले १ कोठा प्रयोग गरेबापत ५ हजार ३ सय ३३ रुपिया कायम गरिएको होटेल का बिक्रि तथा बजार प्रबन्धक अमृत ढकालले जानकारी दिए ।
त्यसै गरि पाहुनाको आगमनलाई सहज बनाउन पोखरा विमानस्थल तथा पर्यटन बसपार्कबाट होटेल सम्म निशुल्क सबारी साधनको व्यवस्था पनि रहेको छ । साथै होटेलमा बसेका पाहुनाले खाना तथा पेय पदार्थ प्रयोग गरेबापत २० प्रतिसत सम्म छुटको व्यवस्था गरिएको प्रबन्धक ढकालले जानकारी दिए ।
३ बर्ष अघि आधुनिक संरचनामा निर्माण भएको होटेलमा आधुनिक तथा उच्च स्तरिय सेवा सुबिधा समेत रहेको छ । होटेलको प्रत्यक कोठामा निजि कौसी रहेकोले हिमाल तथा फेवा तालको सुन्दर दृष्य समेत अबलोकन गर्न सकिने होटेल ले जनाएको छ । निशुल्क पार्किंगको व्यवस्था भएको होटेलमा १०० जना सम्मको लागि आधुनिक सम्मेलन हल, रेस्टुरेन्ट,तथा मास्टर सेफले तयार गरेको खानामा रमाउन सकिने होटेलले जनाएको छ ।
सुनको भाउ तोलामै एक हजार रुपैयाँ घट्यो
दशैं बिदापछि सुनचाँदीको भाउ सस्तियो